Izinhlamvu zemali ezihamba phambili ze-DeFi nge-Market Capitalization | Izinhlamvu zemali ze-DeFi
Thenga i-DeFi Coin
Indlela yokuthenga i-DeFi Coin nge-MetaMask
Ungawuthenga Kanjani Uhlamvu lwe-DeFi Nge-Trust Wallet
Ungayithenga Kanjani I-DeFi Coin ku-Poocoin
Ungayithenga Kanjani I-DeFi Coin ku-Dextools
I-Stake DeFi Coin
Ungayifaka Kanjani I-DeFi Coin ekushintsheni kwe-DeFi
I-DeFi Coin (DEFC) - Joyina ikusasa le-Algorithmic Crypto Trading Strategies
Iphrothokholi yeDeFi Coin ingumbukiso oqhutshwa umphakathi owethulwe iDeFi Token. Imisebenzi emithathu elula yenzeka ngesikhathi sokuhweba ngakunye: Ukucabanga, Ukutholwa kwe-LP, neBurn.
Thenga ku-Pancakeswap Thenga ku-BitMart Thenga ku-DeFi Swap
Abaphathi Abalindelwe ngo-Q3 2022
Kulindelwe i-Liquidity Q3 2022
I-Cap Cap Market
Izinhlamvu zemali ze-DeFi
Ukwethulwa komphakathi nokwethulwa okulungile. Ithimba le-dev lishise wonke amathokheni abo futhi labamba iqhaza nawo wonke umuntu.
Konke ukuhweba kunikela ekwenzeni ukukhiqizwa kwemali okuzenzekelayo okungena emachibini amaningi asetshenziswa ukushintshana
Imivuzo emile ye-RFI
Abanikazi bathola imivuzo engenzi lutho ngokubonisa okungaguquki njengoba bebuka ibhalansi yabo yeDeFi Coin ikhula unomphela.
I-DeFi Coin (DEFC) izophinde inikeze inketho yokubamba iqhaza ekushintsheni okuqoqiwe endaweni yesikhulumi. Sizoba nesigaba samathokheni angenakunyakaziswa (NFT) abasebenzisi abangawahweba nge-DeFiCoin. Ungakhetha ukugcina lawa ma-NFT uma ungumnikazi wawo noma uwahweba ku-DeFiCoinSwap.
Imephu yomgwaqo yakwaDeFi Coins
Thuthukisa Iwebhusayithi Ye-DeFi Shintsha ku-TestNet
Qalisa Iwebhusayithi Ye-DeFi Shintsha ku-TestNet.
Ukwakha ukwethembana nokukhishwa ngokusebenzisa umphakathi
Ukufakwa kuhlu kweCoinmarketcap neCoingecko, uma sekuqediwe, Sizocubungula amaphepha asemthethweni ngeBitmart, ebhalwe ku-Bitmart Exchange.
Yethulwe iDeffi Swap Version 1
Kufaka phakathi uSwap, Hola, Ukulima, Ukuma, imivuzo ephansi yemali yokuthengiselana, imivuzo ephezulu ye-staking kufaka phakathi i-liquid pool.
Qalisa iDeFi Swap Version 2 izofaka Ukuhlaziywa Kwezobuchwepheshe, Ukuhlaziywa Kwevidiyo, iWebinars, Izindaba.
Meyi - Julayi 2022
Qalisa iDeFi Swap Version 3 lokhu kuzoba khona, Ucwaningo, Iforamu, Izimpawu ze-Crypto, Amashadi Asebenzisana, Idatha Yemakethe, Ama-Podcast.
Qalisa i-DeFi Swap App yethu. Lolu hlelo lokusebenza luzotholakala kuwo wonke amadivayisi we-Android ne-IOS. Lolu hlelo lokusebenza luzoba nezici ezilandelayo; okuqukethwe kwezemfundo, yini i-DeFi nokuthi ungayenza kanjani imali ngayo, izibuyekezo, indlela yokuthenga imihlahlandlela, kufaka phakathi amavidiyo angama-isahluko ayi-12 emihlahlandlela.
Julayi - Disemba 2022
Ukusiza izingane emhlabeni wonke ukuzifundisa izinzuzo zobuchwepheshe be-blockchain ngokunikeza imali ngezinsizakusebenza abazidingayo.
IDeFi Coin izosebenzisa imisebenzi emi-3 elula: Ukutholwa kwe-Reflection + LP + Burn ekuhwebeni ngakunye, okwenziwayo kukhokhiswa intela eyi-10% ehlukaniswe ngezindlela ezimbili.
Sizobe sesiqede ukubuyekezwa kwawo wonke amathokheni angama-390 eDeFi atholakalayo ukuze athengwe ngakho konke ukushintshaniswa kwe-crypto.
Iphepha elimhlophe le-DeFi Coin
Iphepha elimhlophe ngumbiko noma umhlahlandlela onegunya owazisa abafundi kafushane ngodaba oluyinkimbinkimbi futhi wethule ifilosofi yomzimba okhipha lolu daba. Kwenzelwe ukusiza abafundi baqonde inkinga, baxazulule inkinga, noma benze isinqumo.
Igama lokuqala laseBrithani eliphathelene nohlobo lwedokhumende ekhishwe uhulumeni liye landa, kwathatha incazelo entsha kwezamabhizinisi. Ebhizinisini, iphepha elimhlophe lisondelene nohlobo lokwethulwa kwezentengiso, ithuluzi elihloselwe ukuncenga amakhasimende nabalingani nokukhuthaza umkhiqizo noma umbono, amaphepha amhlophe angathathwa njengezincwadi ezimpunga.
Kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1990s, igama elithi "iphepha elimhlophe", noma "iphepha elimhlophe", lisetshenziswe emibhalweni esetshenziswe njengamathuluzi wokumaketha noma wokuthengisa ebhizinisini.
Thenga i-DeFi Coin (DEFC)
I-Etoro - Okuhle Kakhulu Kweziqalo Nezazi
Thenga i-DeFi Coin nge-Binance Smart Chain
Inhlokodolobha yakho isengcupheni.
Ungathenga Kanjani i-DeFi Coin ku-PancakeSwap
Kuthatha kuphela imizuzu embalwa
Bukela le vidiyo yesingeniso esisheshayo noma yeqa izinkanyezi esiqondisweni sethu sesinyathelo ngesinyathelo. Uma ungabaza ukuthola eminye imininingwane kuma-FAQ ngezansi.
Qalisa izinyathelo ezi-5 ezilula
Landa i-Trust Wallet bese wenza isikhwama semali. Gcina inkulumo yakho iyimfihlo! Ungalokothi wabelane ngalo nanoma ubani futhi uligcine kahle! Qiniseka ukuthi ukopisha inkontileka ngakwesokunene!
Landa iTrust Wallet
Faka i-DeFi Coin ku-Wallet
Thepha isithonjana ngaphezulu kwesokudla bese usesha i- "DeFi Coin". Uma ingekho, thepha okuthi "Faka Ithokheni Yokwezifiso".
Ngaphezulu, thepha u- "Ethereum" eceleni kweNethiwekhi, bese uyishintshela ku- "Smart Chain". Kopisha ikheli lenkontileka kuleli khasi bese ulifaka ebhokisini lekheli lesivumelwano.
Okulandelayo, faka i- "DeFi Coin" njengegama, nesimboli njenge-DEFC. Amadesimali azoba ngu-9.
Chofoza okuthi "Kwenziwe" phezulu futhi manje kufanele ube ne-DeFi Coin engezwe esikhwameni sakho semali!
Thenga i- "Binance Smart Chain" (BSC)
Thepha ku- "Smart Chain" esikrinini esikhulu se-trust wallet, bese uthepha ku- "Thenga" ngakwesokudla ngaphezulu. Lesi sinyathelo singadinga ukuqinisekiswa kwe-KYC, ngakho-ke yiba nemibhalo elungele ukufakazela ubuwena.
Uma okwenziwayo kungadluli, ungadinga ukuxhumana nebhange lakho ukuvumela ukuthengiselana kwamazwe omhlaba.
Ngemuva kokuthenga, kungahle kube nokubambezeleka ngenkathi okwenziwayo kusacutshungulwa. Yiba nesineke, lokhu kujwayelekile!
Shintsha i-BSC yeDeFi Coin!
Uma ukuthengiselana kwakho sekusuliwe, futhi une-BSC ku-Trust Wallet yakho, Iya ku-DApps (noma "Isiphequluli" sama-iPhones) ezansi kwesikrini esikhulu. Uma inkinobho yesiphequluli ingabonakali ezansi kwe-iPhone, vula iSafari nakuhlobo lwe-URL trust: // browser_enable, bese ubuyela esikhwameni se-trust.
Vula isigaba se-DApps, noma Isiphequluli, bese uthola i-PancakeSwap bese uyivula. Xhuma i-Trust Wallet yakho phezulu kwesokudla. Skrolela phansi kancane ebhokisini elithi "Exchange"
Chofoza isithonjana bese usetha ukushelela ku-15%. Uma ufuna ukuyinika ithuba elingcono kakhulu lokusula, nyusa umnqamulajuqu. Ngokuzenzakalelayo, kufanele isethwe kumaminithi angama-20, okulungile.
Isinyathelo 5: Izinhlamvu zemali zeDeFi
Manje, konke okudingeka ukwenze ukucacisa inani lamathokheni we-DeFi ofuna ukuwahweba. Ngenye indlela, ungafaka nenani lemali ofuna ukulifaka engozini kuDeffi uhlamvu olubuzwayo.
Noma iyiphi indlela, uma usuqinisekise i-oda ku-Pancakeswap - izokwenziwa khona manjalo. Okuhle kunakho konke - i-Pancakeswaap ngeke ikukhokhise isenti kukhomishini noma izinkokhelo zokuhweba ngezinhlamvu zemali ze-Defi!
IDeFi imele ezezimali ezisatshalaliswa - okuyigama elinikezwe izinsizakalo zezezimali ezingenagunya eliphakathi. Ukukunikeza umbono ongcono, iningi lamapulatifomu wezezimali namuhla alawulwa yinkampani eyodwa. Ngokuqhathanisa, ipulatifomu ye-DeFi iqhutshwa yiprothokholi yokubusa eyakhelwe ku-blockchain futhi isebenza kusetshenziswa amafa asezingeni eliphansi njenge-cryptocurrensets.
Yini ukusetshenziswa kweDeFi?
IDeFi ingumkhakha okhula ngokushesha. Namuhla, ungathola amapulatifomu amaningi we-DeFi anikezela ngezinsizakalo ezizenzakalelayo. Lokhu kufaka ukuhwebelana, ukubolekisa, ukuboleka, umshuwalense, ukuphathwa kwempahla, nezinye izinhlangano ezingalawulwa yinhlangano eyodwa.
Ayini amathokheni weDeFi?
Amapulatifomu amaningi eDeFi asungule owabo amathokheni abo e-DeFi azosiza ekuphathweni kwenqubo yayo. Abaphethe la mathokheni omdabu bangathola amalungelo okuvota ohlelweni lwemvelo lweDeFi.
Yiziphi izinhlamvu zemali ezingcono kakhulu zeDeFi?
Amathokheni amahle kakhulu e-DeFi abelokhu eqala ukuthandwa kusukela ekuqaleni kuka-2021. Ngesikhathi sokubhala - amanye amathokheni amahle kakhulu eDeFi ngokwenziwa kwemali emakethe afaka i-UNI, LINK, DAI, ZRX, MKR, COMP, ne-CAKE.
IDeFiCoins.io ngumzamo wokukunikeza ngolwazi olunolwazi ongalusebenzisa futhi uzuze imali ngokutshala imali kuphrojekthi efanele.
I-DeFi Coins izinikele ekugcineni ukufundwa kwayo kusesikhathini ngezitayela zakamuva ezimakethe zeDeFi. Izintatheli zethu nabaphenyi benza ucwaningo olunzulu futhi bakunikeze ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Njengoba umkhakha we-DeFi uzuza kakhulu, wonke amathokheni asebenza ku-DeFi ecosystem kufanele akhuphuke kakhulu. Yilapho singena khona, sivumela abafundi bethu ukuthi balisebenzise ngokugcwele leli thuba futhi bathole inzuzo enkulu.
Joyina i-DeFi Coin Chat kuTelegram Manje!